Top 5 ba lô chống gù tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Top 5 ba lô chống gù tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 ba lô chống gù tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Iluphi uhlobo lwe-anti-humpback ubhaka olulungile? Indlela yokukhetha i-backpack anti-hunchback ukusiza ukuvikela amathambo ezingane ezincane
I-anti-hunchback ubhaka umkhiqizo oshisayo emakethe ngenxa yekhono layo lokuvikela uhlelo lwamathambo ezingane ngesikhathi sokuthuthukiswa. Ngakho-ke ubhaka we-anti-humpback uklanyelwe kanjani ukwamukelwa ngentshiseko engaka ngabazali? Ake sithole ojosaka abahamba phambili abayi-5 abalwa ne-humpback abadumile namuhla esihlokweni esingezansi!
1 Ukwethulwa kwama-backpack anti-humpback
2 Isakhiwo se-anti-hunchback backpack?
3 Iluphi uhlobo lwe-anti-humpback ubhaka oludumile namuhla?
3.1 Randoseru . anti-hunchback ubhaka brand
3.2 I-anti-hunchback ubhaka brand Herlitz
3.3 I-Brand Russian anti-hunchback ubhaka Delune
4 Izikhwama ezingu-5 eziphezulu zokulwa ne-hunchback ezikhethwe abazali abaningi
4.1 I-Monster Truck anti-hunchback ubhaka
4.2 I-Delune Anti-Humpback Backpack
4.3 I-Japanese randoseru anti-humpback ubhaka
4.4 I-Hami anti-hunchback ubhaka waseVietnam
4.5 I-MITI anti-hunchback backpack
5 Ungakhetha kanjani i-anti-humpback ubhaka ongcono kakhulu emakethe
5.1 Isakhiwo sikabhaka
5.2 Impahla ye-backpack
5.3 Isisindo se-anti-humpback backpack
5.4 Umsebenzi wokuzilibazisa wengane
Ukwethulwa kwama-backpack anti-humpback
I-anti-hunchback ubhaka I-backpack wuhlobo lwe-backpack eyenziwe ngesikhumba noma isikhumba sokulingisa esinezithungo ezicophelelayo eziqinisekile ukuthi zinokuvinjelwa kwamanzi okuhle, ukuqina okuphezulu, kuze kufike eminyakeni engu-6 yokusetshenziswa. Lolu hlobo lukabhaka luyinto edingwa uMnyango Wezemfundo wase-Japan kubafundi besikole samabanga aphansi e-Japan.
I-anti-hunchback backpack inomsebenzi ofanayo ne-briefcase evamile esetshenziselwa ukugcina izincwadi, izinto zesikole kanye nezinye izinto ezidingekayo zezingane lapho ziya esikoleni. Kodwa ngomklamo okhethekile kakhulu kunojosaka ovamile, ubhaka ovimbela i-humpback wezingane ungavikela kahle isimiso samathambo esibuthakathaka ukugwema ukugoba komgogodla kanye ne-hunchback uma kufanele baphathe izincwadi ezinzima isikhathi eside.
Abantu abaningi bavame ukuzibuza ukuthi bathenge i-backpack anti-hunchback, impendulo inguyebo. EVietnam, izinga lokugoba komgogodla, izingane ezine-hunchback, njll. zisezingeni elimangalisayo futhi kunzima kakhulu ukuphatha. Esinye sezizathu ukuthi zonke izinsuku izingane kufanele zithwale isikhwama sesikole esisinda kakhulu, amathambo abo asuke entekenteke. Ekuqaleni, izingane zizozizwa zikhathele, ubuhlungu behlombe, ubuhlungu bentamo, njll. Esikhathini esidlule, zizokhubazeka, zithinte ukuma nempilo yazo kamuva.
Isakhiwo se-anti-hunchback backpack?
Ucezu olulodwa anti-hunchback ubhaka Okujwayelekile kuzobandakanya igumbi elikhulu lezincwadi elingu-1 kanye namakhompathi amabili engeziwe kwezinye izinto zesikole. Ngaphezu kokuqinisekisa ukuthuthukiswa okunempilo kwesistimu ye-skeletal yengane, i-backpack ephikisana ne-humpback nayo inesakhiwo esikhethekile esine-pad ende kanye ne-back back pad ukusiza ukusabalalisa isisindo nokunciphisa isisindo emhlane. Idizayini ye-3D strap ivimbela amahlombe ukuthi angaxege, ingemuva aligobi uma ugqoke ubhaka isikhathi eside.
Ukuthenga ubhaka wekhwalithi we-anti-humpback kufanele uhambisane nokusetshenziswa okufanele kwe-anti-humpback backpack ukuze kuphumelele. Abazali kufanele bafundise izingane zabo ukuthi zigqoke zombili izintambo kanye namahlombe womabili ukulungisa ibhande elingekho ngaphezu kuka-10 cm ukusuka okhalweni. Futhi sebenzisa ibhande lebhalansi elinesisindo esiphansi engxenyeni engezansi yezimbambo ezingaphezulu. Qaphela ukuthi izinto ezisinda kakhulu kufanele zibekwe endaweni engaphakathi eduze nomgogodla ngangokunokwenzeka, futhi izinto ezikhanyayo zizoba ngaphandle. Lokhu kuzonciphisa isisindo emahlombe wengane.
Iluphi uhlobo lwe-anti-humpback ubhaka oludumile namuhla?
Ake sithole ezinye izinhlobo ezidumile zamajosaka e-anti-humpback avela eJapan, Vietnam, Russia, njll.
Randoseru . anti-hunchback ubhaka brand
I-Randoseru brand – uhlobo oludumile lwaseJapan indawo yokwethula obhaka bokuqala abalwa ne-humpback. Ojosaka bomkhiqizo bahluka ngesisindo kusuka ku-0.9 kuya ku-1.2 kg kuye ngosayizi nesitayela. Umhlane uklanyelwe ukugona umhlane ukusiza ukusimamisa umgogodla wengane. Ukucacisa nokuthunga okuneziphedi eziphefumulayo ezingenamjuluko ngemuva. Ubhaka wangempela waseJapane we-Randoseru ubiza kusukela ezigidini ezi-2 kuye kwezingu-18 ze-VND kuye ngosayizi neminyaka yokuphila.
I-anti-hunchback ubhaka brand Herlitz
Ibhrendi ye-anti-hunchback backpack i-Herlitz evela eJalimane enemigqa eminingi yomkhiqizo ehlukahlukene enikezela ngezinhlobonhlobo zezingane zobudala obuhlukile. Ubhaka wenziwe ngendwangu ethambile, eqinile futhi ekhanyayo ye-polyester enesisindo esingaba ngu-0.3 kg, ifanele izingane ezincane kanye nezingane ezinesimo somzimba esibuthakathaka. Ingaphandle likabhaka linekhono elikhanyayo lokusiza izingane ziqinisekise ukuphepha lapho zibamba iqhaza kuthrafikhi ebusuku. Intengo yokuthengisa yesikhwama sangempela se-Herlitz cishe i-1.6 ukuya ku-1.9 million VND.
I-Brand Russian anti-hunchback ubhaka Delune
I-Delune iwuhlobo lwamajosaka alwa ne-humpback oluvela eRussia oluthandwa abantu abaningi. Imikhiqizo yalolu shicilelo isebenzisa i-fiber engangenwa amanzi engenakukhanya kakhulu enesisindo esingu-0.9kg, iletha ukunethezeka enganeni lapho isetshenziswa. I-backpack ihlotshiswe nge-3D motifs ekhangayo futhi ekhangayo efanele izingane ezineminyaka ehlukene. Ibhande lenzelwe ukuba libe likhulu ukugcina indawo yokugqoka igxilile ukuze kugwenywe isimo sokuhlikihla nokulimaza ihlombe lomntwana. Intengo yokuthengisa ojosaka bohlobo lweDelune emakethe yezabasebenzi isuka ku-VND 1,250,000 iye ku-VND 1,590,000.
Izikhwama ezingu-5 eziphezulu zokulwa ne-hunchback ezikhethwe abazali abaningi
Okulandelayo yimikhiqizo engu-5 ephezulu ye-anti-hunchback backpack abazali abaningi abayikhethayo njengemithwalo yezingane zabo lapho ziya esikoleni.
I-Monster Truck anti-hunchback ubhaka
I-Monster Trucks wuphawu lukabhaka wase-Vietnamese olukhethelwe abazali abaningi izingane zabo onyakeni omusha wesikole. Ojosaka banezinzuzo zesi-Vietnamese ezenza abazali bazizwe bevikelekile lapho bekhetha, njengokuthi:
Idizayini enhle nenoveli enemifanekiso ecacile elungele ubudala, ubulili nezintshisakalo zezingane eziningi ezincane.
Izintambo ezibanzi, eziphefumulayo zisiza ukusabalalisa isisindo ngokulinganayo ngenkathi kunciphisa ingozi yokuzuza kwemisipha noma ukukhathala kwehlombe. Izintambo ezengeziwe phambi kwesisu zisiza ubhaka ukuba ucoceke, ungagobi ehlombe elilodwa, ikakhulukazi ukulinganisa isisindo lapho uhamba.
I-soft, foam, i-back cushion design ephefumulayo ukuze ingane ingabi nomhlane oshisayo, ikakhulukazi ehlobo. Iphinde isize izingane zithwale ubhaka ngokukhululeka, ihlakaze futhi inciphise ukudonsa okubangelwa isisindo sezincwadi.
Izindawo zokugcina ezibanzi, ezinamakhompathimenti amaningi, zisiza ukugcina izinto eziningi futhi zizikhiphe kalula lapho kudingeka.
I-backpack ekhanyayo engu-360-degree yenza kube lula ngengane yakho ukuthi ibone esimweni sezulu esinokukhanya okuphansi.
Intengo yamanje yemakethe ye-Monster Track ojosaka bama-humpback abasezingeni eliphezulu isukela ku-VND 600,000 ukuya ku-VND 800,000.
Xem Thêm Top 5 đồng hồ báo thức tốt nhất 2021 | Muasalebang
I-Delune Anti-Humpback Backpack
Oda ku-Shopee Order kwaTiki(Okwangempela)
I-Delune iyipheya eliphezulu laseRussia elilwa ne-humpback. Umkhiqizo uklanywe ngokuhlukile ngohlaka lwezibuko ze-3D ezenziwe ngezinto ezikhanyayo, okungenye yemikhiqizo okufanele icatshangelwe ngabazali lapho bekhetha.
Umkhiqizo uklanywe ngohlaka lwezibuko ze-3D olunezinto ezilula kakhulu, ezihlala isikhathi eside futhi azikhubazekile lapho izingane ziphethe izincwadi eziningi. Ngakho-ke, kuthuthukisa ikhono lokuvimbela i-hunchback ne-scoliosis ezinganeni.
Ubhaka unebhande elithambile, idizayini enwebekayo ukuze kukhawulwe ukukhathala ehlombe ukusiza ukwehlisa umthwalo ehlombe lengane. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo unebhande elivundlile ukusiza ukulungisa lapho umntwana egqoke uhambo olude nasemigwaqweni ye-squirrel.
Kusetshenziswa i-fiber ekhanyayo engangeni manzi, imibala egqamile, imihlobiso edonsa amehlo.
Ubhaka unendawo enkulu yokubamba izincwadi kanye namakamelo amaningi engeziwe okugcina izinto zesikole.
Isisindo se-backpack esilula kakhulu, yonke imikhiqizo ye-Delune ingaphansi kwe-1 kg.
Umbhangqwana unamaphuzu akhanyayo ukusiza ingane yakho ukuthi iphephe emgwaqweni ebusuku.
Intengo yokuthengisa ye-Delune anti-humpback backpacks emakethe isukela ku-1,250,000 VND ukuya ku-1,590,000 VND.
I-Japanese randoseru anti-humpback ubhaka
I-Randoseru anti-humpback ubhaka wumkhiqizo ovela e-Japan okhiqizwa futhi wa-oda e-China. Ngakho-ke, ayikwazi ukuqhathaniswa nemikhiqizo yasekhaya yaseJapane, kodwa ama-backpacks asaqinisekisa ikhwalithi futhi ashibhile, afanele imali engenayo yabantu abaningi baseVietnam. Okuvelele kakhulu kwe-randoseru anti-hunchback backpack yilezi:
Umkhiqizo wenziwe ngezinto zesikhumba, ezingenawo amanzi, ngakho-ke ngisho nalapho uhamba emvuleni, izincwadi zengane yakho ngeke zibe manzi.
Ubhaka umayelana 30cm ukuphakama, 23cm ububanzi, 18cm ukuphakama. Uma ingenalutho, isikhwama sinesisindo esingu-990g, igumbi elikhulu elingaphakathi lingalingana nephepha elingusayizi we-A4, igumbi elingaphandle lingabamba usayizi wephepha elingu-A5.
Idizayini enkulu ye-3D yebhande ingalungiswa njengoba ingane ikhula ukusuka ebangeni loku-1 ukuya ebangeni lesi-6.
Ingaphakathi lesikhwama liyamelana nephunga namabhaktheriya.
Ingaphezulu elingemuva linomatilasi oyigwebu ukunciphisa ukuthintana nokumunca umjuluko kuyilapho wehlisa isisindo sezinto ezisemahlombe omntwana. Ngakho-ke, kungenzeka ukugwema ukwenzeka kobuhlungu behlombe ezinganeni.
Intengo yokuthengisa yama-backpacks e-Japanese Randoseru anti-hunchback isukela ku-VND 800,000 ukuya ku-VND 1,000,000
I-Hami anti-hunchback ubhaka waseVietnam
I-Hami iwuphawu oluhamba phambili eVietnam olusebenza ngokukhiqiza izikhwama, amapotimende, ojosaka, njll., okuhlanganisa nezikhwama zesikole ezimelene ne-hunchback. Lona ubhaka we-anti-humpback oshibhile othenjwa omama ngenxa yombala wawo omuhle, olungele izingane ukusuka ebangeni 1 kuya ku-grade 5.
Ubhaka unesisindo esilula esingama-750 g kuphela.
Yenziwe ngendwangu ye-PVC ne-PU ehlanganiswe ne-polyester eqinile, kulula ukuyihlanza. Ingaphambili lesikhwama limbozwe ngento engangeni manzi ukwenza ubhaka uhlale isikhathi eside.
Ibhande lehlombe elilula ukulungisa lisiza ukunciphisa isisindo emahlombe ukugwema ukugoqa amahlombe ezinganeni ezincane.
Idizayini ye-briefcase epholile, engenamanzi, ayithengisi ukungcola futhi ayinalo iphunga elibi.
Ingemuva liklanywe ngedizayini ye-mesh, ephefumulayo ukusiza izingane zigqoke ngaphandle kokushisa, kudala umuzwa opholile futhi onethezekile. Umklamo ofanayo wombala omuhle ulungele izingane kusukela ebangeni 1 kuya ku-grade 5.
Xem Thêm Wipe Data là gì? Điều gì xảy ra khi Wipe Data smartphone? | Muasalebang
I-MITI anti-hunchback backpack
I-MITI anti-humpback ubhaka onomklamo olula, ocophelelayo ungomunye wezikhwama zikajosaka ezilwa ne-hunchback zezingane ezithakaselwa kakhulu namuhla.
Umkhiqizo usebenzisa impahla ye-polyester engasindi, engangeni manzi, ingangenwa izintuli, inwebeka, futhi imelana.
Ibhande lakhiwe ngesimo esikhulu se-3D, ligona ngemuva ukuze lisize ukunciphisa isisindo samahlombe amancane futhi livimbele ukugoqa kwamahlombe.
Umkhiqizo wenziwe ngezandla ezingu-100%, ngakho-ke imininingwane icophelela kakhulu futhi inomdlandla.
Ikhoyili eyisicaba iklanywe ngenguqulo enkulu ye-3D. Ukugona eduze nomhlane kusiza ukunciphisa isisindo emahlombe engane.
Isisindo se-backpack singama-900g kuphela.
Intengo yokuthengisa ye-MITI anti-hunchback backpacks emakethe iphezulu impela, isuka ku-300,000 kuya ku-500,000 VND.
Ungakhetha kanjani i-anti-humpback ubhaka ongcono kakhulu emakethe
Ukuze usebenzise kakhulu izici ze-backpack anti-humpback lapho ukhetha lo mkhiqizo, omama kufanele baqaphele izinkinga ezimbalwa kanjena:
Mayelana nesakhiwo, omama kufanele babeke phambili ukukhetha ojosaka abalwa ne-hunchback abanamagumbi amaningi ukuze izingane zikwazi ukusabalalisa kahle nokuhlela izincwadi nezinto zesikole. Indlela yokuhlela amathuluzi iwukuhlela izinto ezisindayo egumbini elisizwa amandla elitholakala endaweni engaphakathi eduze nomgogodla kanye nezinto ezincane ngaphandle. Ukuhlelwa okunjalo kuzosiza ukunciphisa isisindo emahlombe wengane.
Ibhande lingalungiswa kalula ukuze lilinganise amandla adonsela phansi ukuze avumelane nobude bengane yakho. Ukunakwa kufanele kukhokhwe ukulungisa ibhande langemuva lingabi ngaphezu kuka-10 cm. Ibhande lebhalansi yesisindo lilungisa eduze okhalweni endaweni engaphansi kwezimbambo esiswini ukuze lisize ukusabalalisa isisindo semishini, okwenza umntwana azizwe elula lapho egqoke isikhwama.
Ingemuva lingiswa ijika lengemuva lengane eline-smart padding, liqinile ukuze lingagobi. Ingaphandle lifakwe indwangu engangeni manzi ukusiza ukumunca umjuluko, ukuphefumula, ukusiza izingane zizizwe zikhululekile ehlobo elishisayo.
Kudingekile ukukhetha indwangu engangeni manzi njengendwangu ye-PVC yezinga eliphezulu ukuze kube lula ukuyihlanza ukuze kwandiswe ukuqina futhi lapho lina, akudingekile ukuba ukhathazeke ngokuthola izinto ngaphakathi ezimanzi.
Isisindo se-anti-humpback backpack
Ubhaka ovimbela i-humpback akufanele ube mkhulu kakhulu noma usinde kakhulu ngokweminyaka nesisindo somntwana. Isisindo sikabhaka, okuhlanganisa nokuphakathi, akufanele sibe ngaphezu kuka-10 kuya ku-15% wesisindo somzimba wengane. Isibonelo, ingane enesisindo esingama-20kg, i-backpack anti-humpback engaba ngu-2 kuya ku-3 kg yiyona ejwayelekile kakhulu.
Umsebenzi wokuzilibazisa wengane
Ekuqaleni, i-backpack anti-humpback yayinemibala emibili kuphela: obomvu wamantombazane nomnyama wabafana. Nokho, manje sekunemibala eminingi ehlukahlukene kanye nendlela yokwenza ukuze usize izingane zikhethe ngokuvumelana nalokho ezikuthandayo. Lona umkhiqizo ohlala isikhathi eside futhi uhamba nengane yakho nsuku zonke lapho iya esikoleni, ngakho sicela uthintane nengane yakho ukuze ubone ukuthi hlobo luni oluthandayo ngaphambi kokuthenga.
Ama-backpack anti-humpback ngokuvamile anewaranti yeminyaka engu-2, ngakho-ke ngaphambi kokukhetha ukuthenga isikhwama, udinga ukufunda ngokucophelela mayelana newaranti yokulungisa njalo lapho kunenkinga.
Ucezu olulodwa anti-hunchback ubhaka Ikhwalithi izoba umngane wengane yakho endleleni ende eya esikoleni. Emikhiqizweni engu-5 edume kakhulu ye-backpack anti-humpback esiyincomayo namuhla I-Monster Truck Anti-Humpback Backpack. Ngethemba ukuthi omama bakhethele izingane zabo ojosaka abafanele ukuze zikwazi ukungena onyakeni omusha wesikole kahle.
(Kuvakashelwe izikhathi eziyi-1,746, ukuvakashelwa okungu-1 namuhla)
Tổng hợp các đồ gia dụng nhà bếp chất lượng của Việt Nam cho căn bếp | Muasalebang
Đánh giá chi tiết HTC U12+: Xứng đáng là giấc mơ của một tín đồ công nghệ đích thực | Muasalebang